तपाईकाे नङ टाेक्ने बानि छ ? ध्यान राख्नुस यास्ताे खतरा हुनसक्छ ! | Samacharpati तपाईकाे नङ टाेक्ने बानि छ ? ध्यान राख्नुस यास्ताे खतरा हुनसक्छ ! – Samacharpati
काठमान्डाैँ, ५ फागुन । कतिपयको बानी हुन्छ, नङ टोक्ने । फुर्सद पाउनसाथ उनीहरु नङ टोक्न थाल्छन् । जबकी आफुले नङ टोकिरहेको उनीहरुलाई भेउ हुँदैन ।
नङ टोक्ने बानी सामान्य लाग्न सक्छ । तर, यसले स्वास्थ्यमा निकै नराम्रो असर पुर्‍याउँछ । के पनि भनिन्छ भने, नङ टोक्नु भनेको तनावग्रस्त हुनुको संकेत हो । तर हामी हाम्रो नङ टोक्ने बानीबाट हामी सजिलै छुट्कारा पाउन सक्दैनौं ।
फोहोर नङ चपाउनाले रोगका किटानुहरु शरीर भित्र प्रवेश गर्छ
नङमा साल्मोनेला र ईकोलाई जस्ता रोगहरु उत्पन्न गर्ने किसिमका ब्याक्टेरियाहरु हुन्छन् । जब तपाई दाँतले नङ टोक्नु हुन्छ, ब्याक्टेरिया सजिलै तपाईंको मुख भित्र प्रवेश गर्छ । यस्तो स्थितिमा तपाइर्ं अवश्य पनि बिरामी पर्नु हुन्छ । विभिन्न सर्वेक्षणहरुका अनुसार हाम्रो नङ हाम्रो औंलाको टुप्पो भन्दा दुई गुणा वढि फोहोर हुन्छ । त्यसैले नङ चपाउन हाम्रो लागि अति नै हानीकारक हुन सक्छ ।
स्किन इन्फेक्सन हुन सक्छ
नङ टोक्नाले नङ वरपरका छालाको कोशिकाहरुलाई पनि हामी पुग्छ । यस्तो अवस्थामा पेरोनिसियाबाट पीडित हुने पनि खतरा हुन्छ । यो एउटा स्किन इन्फेक्सन हो, जुन नङको वरपरको छालामा हुन्छ ।
दाँतलाई पनि हानी पुर्‍याउँछ
नङ चपाउनाले दाँतमा एकदम नराम्रो असर पर्छ । नङबाट निस्कने फोहोरले तपाईंको दाँतलाई कमजोर बनाउन थाल्छ । एउटा सर्वेक्षण अनुसार धेरै नङ टोक्ने मानिसहरुलाई धेरै तनाव हुन्छ । जुन व्यक्तिमा नङ टोक्ने बानी छ, त्यो व्यक्तिलाई तनाव छ भन्ने संकेत प्राप्त हुन्छ । नङ टोक्दा नङमा समावेश भएका फोहोरहरु दाँतसम्म पुगिरहेको हुन्छ, जसले दाँत कमजोर हुन थाल्छ ।
छालामा घाउ हुन सक्छ
बारम्बार नङ टोक्ने मानिसहरु डर्मेटोफेजिया नामक रोगको शिकार हुन सक्छन् । यो रोग लागे पछि छालामा घाउ हुन थाल्छ । घाउ बढ्दै गयो भने त्यसको इन्फेसनले नसामा पनि हानी पुर्‍याउँन सक्छ ।
क्यान्सरको पनि खतरा हुन्छ
सधै नङ टोक्नाले अन्द्राको क्यान्सर हुन्छ । वास्तवमा नङ टोक्दा नङमा समावेश ब्याक्टेरिया हाम्रो आन्द्रासम्म पुग्छ र क्यान्सर जस्तो घातक रोग पनि लाग्न सक्छ ।
यदि तपाईंको पनि नङ टोक्ने बानी छ भने आजबाट नै यो बानीबाट छुट्कारा पाउनुहोस् । किन भने नङ टोक्ने बानीले तपाईंलाई धेरै कुराहरुबाट हानी पुर्‍याउँछ ।
गण्डकी प्रदेशमा १०३ काेराेना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितकाे संख्या १३०७९ पुग्याे
सीमा मिचेकोमा आपत्ति जनाउँदै साना दलहरुले सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा
सुनिल थापाको अभिनय रहेको म्युजिक भिडियो ’राते काईला’ को टिजर सार्वजनिक